(Last Nohavaozina: 23/10/2020)
Eny, fiaran-dalamby hanina mety ho mahatalanjona Kanefa na dia fiaran-dalamby sakafo tsara indrindra mampitaha ny Copenhagen ny Noma! dia ny Fanilo ny Nordic sakafo, ary tokony hanao ny zava-drehetra ao amin'ny hery handeha hanamarina izany. Tsy vitan'ny hoe ity iray ity dia iray amin'ireo tsara indrindra ho an'ny Foodies Tanàna any Eoropa, fisakafoanana dia ny No.. 1 toerana ao amin'ny San Pellegrino lisitry nandritra ny taona maro! Eny, ny vidin-javatra dia avo, fa ny fanandramana ianao fahazoana ho very maina izany. Raha te-miseho eo Skandinavia lamasinina, Copenhagen vavahady lehibe dia nijanona noho ny manao izany.
Trieste an'ny Fanjakana Aotrisy-Hongria mandra-pahatongan'ny Ady Lehibe I. Izany zava-misy eto Mampitombo ny lanjan'ny sakafo matsiro Trieste ny. Nahoana? Satria ny tantara Trieste namela Mitana fiantraikany eo amin'ny nahandro. Atypical an'ny Italiana miavaka vilia, Trieste prides amin'ny combos hafahafa toy izany ny paty sy ny ny pizza miaraka ny laisoa nalona ary nivava saosisy, ary toy izany koa. Ankafizo tsara tarehy sakafo, creamy sôkôla, ary mahafinaritra kafe ao an-tanàna izay James Joyce nanomboka nanoratra Ulysses. Ny mahavariana fijery manerana ny Adriatika tsy handratra ny fahazotoan-komana, na. Ny fifandraisana eo amin'ny Italia sy ny Slovenia tanteraka ny lalamby, mba hahafahanao manome vintana Slovenia raha mbola eo amin'ny manodidina.